Cayaaraha carabta Mau cat | Bisadaha Noti
Ciyaaraha fudud ee Carabiya Mau
Monica Sanchez | | Bisadaha, Jinsiyadaha
Bisadda eyda Carabi mau Waa carrab dhogor qurux badan oo Carab ah in kastoo aan weli si fiican loo aqoon, haddana in yar oo ka mid ah waxay nashaad ka dhigaysaa guryaha mukulaalayaasha mukhaadaraadka u leh reer Galbeedka.
Muuqaal muujiya, gabadhan quruxda badan waxay jeceshahay inay ordo oo ciyaarto, laakiin sidoo kale waxaad ku raaxeysan doontaa inaad noqoto bartamaha dareenka aadmiga aad jeceshahay.
1 Asalka iyo taariikhda Carabtii Mau
3 Dabeecad iyo qofnimo
4 Daryeelka Carabiga Mau
4.5 Kalgacal iyo shirkad
5 Waa maxay qiimaha Carabi Mau?
6 Sawirada bisada Mau ee carabta
Asalka iyo taariikhda Carabtii Mau
Carabtii Mau Waa nooc bisad ah oo si iskeed ah uga dhex muuqatay Bariga Dhexe, oo uu keli ku noolaa ilaa degsiimooyinka dadku aad iyo aad u bateen. Markay taasi dhacday, dhakhaatiirtii waxay ogaadeen inuu ku heli karo cunto bilaash ah meel aysan xaaladaha nololeed aad u wanaagsanayn, sidoo kale shirkad.
Si tartiib tartiib ah, waxay luminaysay astaamo awoowayaasheeda ka timaadda markii ay ka gudbeen noocyada kale ee bisadaha laga keenay qaybaha kale ee adduunka. Si kastaba ha noqotee, lama ogaan ilaa 2004, markii abuure Peter Mueller uu bilaabay xulashada kittens. 4 sano kadib, helay jinsiga ay aqoonsatay Xiriirka Bisadaha Adduunka (WCF)
Waa bisad leh Jidh adag, muruq iyo jimicsi oo miisaankiisu u dhexeeyo 4 ilaa 6kg. Madaxa ayaa wareegsan, oo leh garka si caddaalad ah loogu dhawaaqo iyo dhego waaweyn, saddex geesood ah, waxyarna laga beddelo. Lugaha waa kuwo adag, oo loo sameeyay inay awoodaan inay safraan masaafo dheer.
Koodhku waa siman yahay, wuxuuna noqon karaa bunni, cawl, iyo mottled.. Madowga iyo caddaanka waxaa la aqbali karaa oo keliya haddii aysan dhibco lahayn. Waxay leedahay rajo nololeed oo ah 14 sano.
Dabeecad iyo qofnimo
Carabiga Mau wuxuu jecel yahay jimicsiga. Waa xayawaan in kasta oo uu la qabsan karo ku noolaanshaha guri dabaq ah, waxaad ku noolaan doontaa si ka wanaagsan guri leh barxad ama beer halkaasoo aad ka dareemi karto ur kala duwan oo aad ku yeelan karto kicino kala duwan oo aanu dabaq lahayn Maxaa intaa ka badan, isagu waa nin caqli badan oo xoogaa madax adag, sidaa darteed waxaa la bari karaa tabaha haddii bisadaha lagu daweeyo loo adeegsado inay ka farxiyaan.
Haddii uu bulshada dhexdeeda ka dhexeeyo eey yar, aad ayey ugu fududdahay inuu la qabsado eeyaha iyo bisadaha kale.
Daryeelka Carabiga Mau
Iska ilaali inaad ku siiso iyaga badarka. Kuwani, oo aan awoodin inay si sax ah u shiiddo bisadda, waxay sababi kartaa dhibaatooyin sida xasaasiyadda. Sidaas darteed haddii aan taas maanka ku hayno, ku habboon ayaa noqon lahaa in la siiyo quud aan lahayn hadhuudh, ama hadhuudh la'aan, waana taa hodan ku ah borotiinka xoolaha.
Sikastaba, haddii aad fursad u leedahay inaad talo ka raadsato nafaqo yaqaan fahamsan cuntooyinka dabiiciga ah ee loo yaqaan 'felines', ha ka waaban inaad siiso Barf. Jirkaaga ayaa hubaal ka mahadcelin doona.
Si nadaafada bisadu ay ufiican tahay waa muhiim in dhowr waxyaalood la sameeyo. iyo weel dhaqe.
Sidoo kale sidoo kale isku day inaad quudiyaha iyo cabbitaanka ka fogeysid santuuqa qashinkaaga, sababo aad u fudud awgood: ma jeceshahay inaad wax cuntid adigoo saxarradaada uraya. Dareenkan, ku habboon ayaa ah cuntada iyo biyuhuba waxay ku jiraan qol ka duwan kan WC-gaaga gaarka ah.
Taranka Carab Mau looma saadaalin cudurada waaweyn, marka laga reebo kuwa kale ee laga yaabo inay yeeshaan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa noole, sidaas darteed intaad nooshahay waad jiran kartaaSidaa awgeed, booqashooyinka joogtada ah ee dhakhtarka xoolaha waa lagama maarmaan. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad u tagto si aad isaga tallaasho markii loo baahdo, oo aad tuurto haddii aadan u jeedin inaad dhaliso.
Waxaad u baahan tahay inaad jimicsi badan hesho maalin kastaSidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad u hurto inta ugu badan ee suurtogalka ah inaad la ciyaarto isaga oo markaa uu gubi karo tamarkiisa.
Kalgacal iyo shirkad
Sii jacayl maalin kasta, laakiin haa, adigoon ka badin ama cadaadis saarin. Waqti yar u qaado maalin kasta si aad u fahamtid luqadda jirkooda. Tani waxay sii wanaajin doontaa xiriirkaaga xitaa mid sii wanaagsan. Sidoo kale, iskuday inaad siisid gasacadaha cuntada qoyan ama bisadaha lagu daaweeyo waqti ka waqti si aad ugu faraxgasho xoogaa.
Sidoo kale, waa inaad la joogtaa isaga, iskuday inaad ka dhigto mid qoys ahaan u nool.
Waa maxay qiimaha Carabi Mau?
Ma waxaad raadineysaa qiimayaasha bisadda Carabiya Mau? Haddii jawaabtaadu tahay mid xaqiijin ah, waa inaad ogaataa inay ku saabsan tahay 600 euros haddii laga helo meel ugaadhsasho. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ka iibsato dukaanka xayawaanka, waxay kugu kacaysaa qiimo ka yar, oo ku saabsan 300-400 euro.
Laakiin maskaxda ku hay in bisadu ay tahay inay ugu yaraan labo bilood jirsato, maaddaama ay sidaa tahay waa laga gudhi doonaa oo waxay bilaabi doontaa cunista cuntada adag.
Sawirada bisada Mau ee carabta
Bisadda Carabiya Mau waxay leedahay muuqaal qalaad oo kaa dhigi doonta inaad jacayl ku dhacdo isla markaaba. Sababtaas awgeed, waxaan dooneynay inaan ku soo lifaaqno sawirro dheeri ah si aad u fiiriso iyaga:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Ciyaaraha fudud ee Carabiya Mau
Mahadsanid, Waad ku mahadsan tahay maqaalka!
Waxaan haynaa bisad Mau Arabe oo laga soo korsaday Dubai oo nala soo noqotay Spain. Tilmaanta ku jirta qodobkan waxaa lagu buuxiyey warqad ahaan.
Sida muuqata waxaa jira odhaah soo koobeysa dabeecada bisadan: "hadaadan heli karin eey, hel Mau." Haddii aadan haysan karin eey, korsado Mau.
Waxaan jeclaan laheyn inaan kula kulanno milkiileyaasha kale ee Mau (Carabi, Masaarida) Isbaanishka
Waxaan kuugu hambalyeynayaa bisadda 🙂
La kulan bisadda Neva Masquerade
Japanese Bobtail, bisad caan ah oo aad u jecel bisad Oriental ah